Yini isenzo sokudalula izinto eNew York? Kuyini ukuhlengwa? - I-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Yini isenzo sokudalula izinto eNew York? Kuyini ukuhlengwa?
August 9, 2016 Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUVeer Patel
Kusho ukuthini ukubikezela eNew York?
Lapho uyeka ukukhokha imali obambise ngayo, ibhange lifaka isikhalazo sokuthengisa ikhaya lakho ukwanelisa inothi yezokuphepha (imalimboleko) - lokho kuvezwa. Kodwa-ke, kuya ngokujulile kunalokho.
Yonke inhloso yokuletha isenzo sokusobala ukuqeda ukulingana kokuhlenga komuntu obolekayo nawo wonke amanye amaqembu. Lokho kungomlomo. Ingxenye ebalulekile okufanele uyiqonde ukulingana kokuhlenga. Leli lilungelo elinikezwe obolekayo noma kunoma yimuphi umnikazi wamalungelo obolekayo olandelayo wokukhipha imali ekweletwayo ukuze asule isihloko (imboleko yempahla mboleko). Umuntu oqashisa kule ndawo efana nabaqashi kanye nabahlanganisi abancane nabo banelungelo lokuhlenga (lesi sigaba sesibili sabantu kufanele sibe nentshisekelo esidingekayo ukuvikela).
Ungayithola kanjani indlu yakho ebikezelwe ngaphambili eNew Jersey ngemuva kokuba ithengiswe eSheriff Auction.
Ngakho-ke umuntu kufanele akhokhe malini ukuhlenga? Yisamba sonke esivikelwe yimpahla ebanjiswayo. Lokhu kufaka phakathi uthishanhloko, inzalo kuze kufike usuku lokuhlenga, imali yabameli, izindleko zenkantolo nezindleko ezivunyelwe ngumthetho. Ungaxhumana nebhange noma abameli babo ngqo ukuthola inombolo eqondile.
Icala le-1970 elibizwa ngokuthi yi-Hardyston National Bank v. Tartamella libambe ukuthi lowo obolekayo angasebenzisa ilungelo lakhe lokuhlenga sonke isikhathi sosuku lwe-10 kulandela ukuthengiswa okwandulelayo (isikhathi esibekwe ngaphansi komthetho ohlukile ovumela ukuphikisana ukuthi kuthengiswe ngaphakathi kwe10 izinsuku). Uma iqembu lenza ukuphikisana nokuthengiswa, ilungelo lokuhlenga liyanwetshwa kuze kufike usuku lapho iziphikiso zixazululwa yijaji. Uma iklayenti likhetha ukuhlenga, umbolekisi kufanele anikeze inani eliphelele lokwahlulela nazo zonke izindleko nezindleko ezinesiphakamiso kuwo wonke amaqembu (kufaka phakathi isherifu). Lesi sinqumo kufanele sibekele eceleni ukuthengiswa futhi simise osherifu ekuhambiseni itayitala kumthengi. I-oda kufanele lifake phakathi umyalo wokukhipha ukwaneliseka kwesinqumo lapho imali itholile.
Uma ngabe ubhekene necala, abameli bethu bezokuvikela isimo bayatholakala ukuthi banikeze usizo mahhala ngamacala okuvela kwaseNew York kanye namacala okumbulwa kwesakhiwo angaphandle kweNew Jersey. Amahhovisi ethu atholakala eJersey City naseNew York City.